सम्पादकीय मेलम्चीको हेलचेक्य्राइँ ! सुरुङ परीक्षणकाे निर्धारित मापदण्ड पूरा नै नगरी उद्घाटन गर्नु अपराध हो
आयोजना सम्पन्न नहुँदै हतारमा उद्घाटन गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट सुरुङको परीक्षणका लागि भन्दै आगामी असार १ बाट पानी वितरण बन्द गरिने बताइएको छ । मेलम्चीसमेत व्यक्तिगत सनक लहड र स्वार्थमा देश र जनताको जति ठूलो क्षति भए पनि उपेक्षा गर्ने ओली प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण बन्न पुग्यो ।
मेलम्चीको सुरुङ परीक्षणका क्रममा पहिले दुर्घटना हुँदा दुई जना प्राविधिक कर्मचारीको ज्यानै गएको थियो । त्यसपछि मर्मत गरेर सुरुङमा पुनः पानी भरिएको थियो । त्यति भइसकेपछि पनि सुरुङको परीक्षण विधिवत् सम्पन्नै नगरी उद्घाटन गराइयो ।
आयोजनाको ‘टेस्टिङ एन्ड कमिसनिङ प्रोटोकल’ पालना गरिएको भए सुरुङमा पानी भरेपछि दुई सातासम्म दुवैतर्फको मुख बन्द गरेर सुरुभित्रै पानी अड्याउनु पर्थ्यो । त्यसपछि त्यसरी नै बिस्तारै पानी खाली गरेर सुरुङको परीक्षण गर्नुपर्थ्यो । निर्माण गर्न २५ वर्ष लागेको आयोजनाको उद्घाटनका गर्न २५ दिन लाग्ने परीक्षणका लागि पनि पर्खने धैर्य सरकारी अधिकारीले देखाउन सकेनन् ।
परन्तु, बीसौं वर्ष लागेको योजना सम्पन्न गरेको जस लिने र इतिहासका ‘नाम’ राख्ने लोभमा कर्मचारीलाई दबाब दिएर राम्ररी सम्पन्नै नभएको मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटन गरियो । धरहरामा पनि यसरी नै काम नसकिँदै उद्घाटनको तमासा गरिएको गरिएको थियो । मेलम्ची पनि त्यही प्रवृत्तिको सिकार भयो ।
यसरी बलमिचाइँ गर्दा सुरुङ सधैँ नै भत्कने जोखिममा रहने भयो । परीक्षणको मापदण्ड पूरा नगरी यसरी सञ्चालन गर्दा फेरि भत्किन र अकल्पनीय दुर्घटना हुनसक्थ्यो । तैपनि, उद्घाटनको व्यक्तिगत सनक पूरा गर्न आयोजना र प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई यति ठूलो र डरलाग्दो जोखिममा पारियो ।
आयोजना र जनतालाई भयावह जोखिममा पारेर समय नपुगी उद्घाटनका निम्ति दबाब दिने, उद्घाटन गर्ने र गराउनेका साथै आयोजनाका ठेकेदार तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरू पनि यस गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका लागि दोषी देखिन्छन् । आयोजना सम्पन्न गराएको जस पाउनुपर्नेहरू यति गैरजिम्मेवार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो ।
आयोजना ठेक्का लगाउँदा विधि र प्रक्रियामा तलमाथि भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियामक निकायले हस्तक्षेप गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्छन् । निर्माणमा अपनाउनुपर्ने विधि, गुणस्तर र मापदण्ड पालन नगर्नेहरू पनि त्यस्तै कारबाही र सजायका भागी हुन्छन् ।
देशको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीजस्ता व्यक्तिहरूले एउटा आयोजना उद्घाटन गर्ने लोभमा यति भयानक जोखिमको बेवस्ता गरेको घटना संसारकै इतिहासमा बिरलै भेटिएला । राजनीतिक नेतृत्वले दबाब दिए पनि आयोजनाका कर्मचारीले त कम्तीमा ‘प्रोटोकल’ उल्लङ्घन हुन दिनु हुँदैन थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले गर्न नहुने धेरै कृत्य गरेका छन् । इतिहासमा उनीहरूको लेखजोखा हुने नै छ । मेलम्ची आयोजनाका कर्मचारीले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेनन् । जति नै ढाकछोप गर्न खोजे पनि दबाबमा मापदण्ड मिचिएको स्पष्ट भएको छ । केही खराबी भएको रहेछ भने त्यसको दोष राजनीतिक दबाबको ढाकछोप गर्ने कर्मचारीकै थाप्लामा पर्ने निश्चित छ ।
गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई पनि सजाय हुनुपर्छ। यस्तो ठूलो गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति पनि दण्डित नभए मुलुकले कुनै न कुनै बेला ठूलो क्षति सहनुपर्नेछ । प्रार्थना गरौँ, मेलम्चीको सुरुङमा कुनै खराबी नदेखियोस् र उपभोक्ताले लामो समय फेरि काकाकुल हुन नपरोस् !
#मेलम्चीको हेलचेक्य्राइँ !